यी हुन नेपालसँग साइनो रहेका भारतीय कलाकारहरु कस्को कस्तो साइनो ? - Sidha News
यी हुन नेपालसँग साइनो रहेका भारतीय कलाकारहरु कस्को कस्तो साइनो ?
काठमाडौं। बलियुड कलाकार हरु जुन भारत का भएता पनि नेपाल संग साइनो रहेका कलाकार हरु को बारेमा चर्चा गर्दै छौ ! नेपालीहरु लाई भारतीय कलाकार अर्थात बलियुड का कलाकार हरु धेरै नै मन पर्दछ बलियुड कलाकार हरुका नेपाल मा पनि धेरै फ्यान हरु रहेका छन् !